WINDOWS 10 ကိုအတွက်စနစ်ကဖိုင်တွေ၏သမာဓိကိုစစ်ဆေးခြင်း - WINDOWS ကို - 2019
သုံးပါနှင့် Windows 10 မှာစနစ်ကဖိုင်တွေ၏သမာဓိစစ်ဆေးနေ၏ပွနျလညျထူထောငျ
အချို့သောကွန်ပျူတာစပီ၏အားနည်းချက် - ခံစားချက်ဘေ့စ, အလယ်အလတ်မရှိခြင်း, ဆင်းရဲသော dynamic range ကို - အစဉ်အမြဲအငြိမ့်သင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများကိုနားထောင်ခွင့်မပြု။ စပီကာစုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်ကိုလည်းတပ်မက်လိုချင်သောအခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာမည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျွန်တော်တစ်ဦးကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်သံကိုချဲ့ထွင်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာနှင့်ထိုသူအချို့အပေါ်သံကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများအထူးဆော့ဗ်ဝဲဒါမှမဟုတ် operating system ကိုသူ့ဟာသူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်နွှယ်နေသော။ Programs ကိုသင်ခြုံငုံ output ကိုအဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုနှင့်သီးခြားထုတ်ကုန်များနှင့်သံကိုကတ်များနှင့်အတူကို bundle လာသည့်ယာဉ်မောင်းသို့ခွဲခြားထားတယ်။ Windows ကိရိယာတွေကြောင့်, ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်အလွန်ကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုကူညီပေးသည်။
Method ကို 1: "ကိုယင်ကောင်ပေါ်တွင်" Gain
ယင်းကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုထဲမှာ, စပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ်ထဲကနေအသံ level ကိုတက် setting ထဲမှာအထောက်အကူပြုဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Programs ကိုအတော်လေးတွေအများကြီးကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ လျှောတရံများနှင့်မြေတပြင်လုံးသည်အသံပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာနှစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ - ကိုနားထောငျနှင့်အသံ Booster ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Programs ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံမြှင့်တင်ရန်
ဒီပရိုဂရမ်အသံနှင့်အလုပ်လုပ်များအတွက်ဘက်စုံသုံးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသင်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတင်ထားရန်နှင့်အချက်ပြမှုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျနော်တို့အဆင့်တိုးမြှင့်ဖို့သာဖြစ်နိုင်ချေစိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ လက်ျာတန်းတူအတူ slider ကို tab ကိုဖြစ်ပြီး, ဟုခေါ်သည် "Preamp (dB)"။ လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်ကညာဘက်ကိုဆွဲရန်လိုအပ်ပေသည်။
5 ကြိမ်နှင့်သုံး Modes သာမှအသံထများကိုချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်း - ဤအင်္ဂါရပ်များစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ software ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ interface ကိုစနစ်ဗန်းထဲမှာ icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သမားရိုးကျ slider ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အသံ Booster Download
အဆိုပါ sound volume ကိုအနိမ့်တန်ဖိုး 100% နှင့်ထိပ်တန်း 500% ကြောင်းတည်းသောခြားနားချက်နှင့်အတူ Windows ရဲ့စံထား tool ကိုကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
ယာဉ်မောင်းလက်အောက်တွင်ဤကိစ္စတွင်ငါတို့သည်သံကိုကတ်ထုတ်လုပ်သူများကထောက်ပံ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုဆိုလိုတာ။ အားလုံးကတော့, ဒါပေမယ့်ဒီပရိုဂရမ်အတော်များများဟာ signal ကိုအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်နိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကို Creative ကနေ software ကိုသင် EQ slider ကို setting များကို window တွင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အချို့ကမီဒီယာပလေယာပေါင်း 100 အထက်% ၏အသံအတိုးအကျယ် "ဝက်အူဖြုတ်" ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒီ feature VLC Media Player ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: ဖိုင်တွေအတွက်အသံ level ကိုမြှင့်တင်ခြင်း
ကျနော်တို့က PC ကိုစပီကာရဲ့အသံအတိုးအကျယ်တိုးလာရှိရာယခင်နည်းလမ်း, မတူဘဲ, ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်းအမြစ်မီဒီယာဖိုင်ထဲမှာတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း၏အဆင့်ကို "စဉ်းစားဖို့" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထူးဆော့ဖျဝဲ၏အကူအညီဖြင့်လည်းပြုမိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Audacity နှင့် Adobe ကစာရင်းစစ်စဉ်းစားပါ။
ဤသည်အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသံဖိုင်အပုဒ်ကို process ဖို့အများကြီး features တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာသူမ၏လက်နက်တိုက်၌၎င်း, သငျသညျ tool ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိ၏။
program ကို run နှင့် Workspace သို့ဖိုင်ကိုဆွဲယူပါ။
မီနူးဖွင့်လှစ် "အကျိုးသက်ရောက်မှု" နှင့်ရှေးခယျြ "အချက်ပြ amplification".
slider ဒက်စီဘယ်ယူနစ်အတွက်လိုအပ်သောအဆင့်ကိုဖော်ထုတ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Program ကိုသငျသညျအခြို့တန်ဖိုးကိုအထက်လွှဲခွင်သတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အလံ, set ဖြစ်ပါတယ်။
မီနူးမှဆက်လက်ဆောင်ရွက် "File" နှင့်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ပို့ကုန်အသံ".
ဖိုင် format ကိုရှေးခယျြပါကအမည်နှင့်ကလစ်နှိပ်ပေးပါ "Save".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Audacity ဖို့ mp3, format နဲ့သီချင်းကိုကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အရှင် သာ. အသံအောင်သည်လမ်းကြောင်းအတွက်အသံအချက်ပြမှုလွှဲခွင်ကိုတက်ခူး။
Audishn - အသံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ဖွဲ့စည်းမှုများအတွက်အစွမ်းထက် software ဖြစ်ပါသည်။ , filter များထားဆူညံသံများနှင့်အခြား "အပို" အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်, အဆောကျစတီရီယိုရောနှောကိုသုံးပါ - ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သငျသညျအရှုပ်ထွေးဆုံး signal ကိုကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဒီအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှလျှော့ဖြစ်ပါတယ်။
Adobe ကစာရင်းစစ် Download
Adobe ကစာရင်းစစ်အတွက် file ကိုဖွင့်ပါ, သင်ရိုးရှင်းစွာအယ်ဒီတာကဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ tuner ၏လွှဲခွင်ကိုရှာပါ, အ controller ကိုရန် cursor ကိုညွှန်ကြားပါကလိုချင်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိသည်အထိညာဘက် LMB နှင့်ဆွဲကိုင်လော့။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသိမ်းဆည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်: သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ် CTRL + SHIFT + S ကို(ကဖြစ်သကဲ့သို့သင်ကထွက်ခွာနိုင်) သည်နမူနာကြိမ်နှုန်းကို set up ပုံစံ, ကို Select လုပ်ပါ, ကျနော်တို့ဖိုင်နှင့်စာနယ်ဇင်းများ၏အမည်နှင့်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန် OK ကို.
Method ကို 3: Operating System Tools
Third-party software ကိုထုတ်ကုန်များ၏အကူအညီဖြင့်တိတ်ဆိတ်သံကိုခိုင်မာစေရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမပြုမီ, သင်သေချာအများဆုံးဟုသတ်မှတ်စနစ် setting တွင်အသံ level ကိုစေရပါမည်။ သင်ကအသိပေးချက်ကိုဧရိယာထဲမှာစပီကာ icon ပေါ်မှာ LMB နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ slider ကိုပု uppermost အနေအထားတွင်တည်ရှိသည်လျှင်, အများဆုံးအဆင့်ကို, မဟုတ်ရင် up ပြုလုပ်ဆွဲယူဖို့လိုအပ်ပေသည်။
အသံ play နိုငျသော Applications ကို - browser များသို့မဟုတ်ကစားသမားလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်ရှိသည်။ အဆိုပါရောနှောနေတဲ့စပီကာတွေနဲ့အတူတူ icon ပေါ်မှာယွမ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မဖြစ်၏ဆက်စပ် menu ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ပိုများသော: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အသံကို set up လုပ်နည်း
Method ကို 4: စပီကာများအစားထိုး
amplification အဆင့်ကို software ကိုအမြဲအရည်အသွေးမြင့်ပြန်ဖွင့်ဖို့အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းဆော့ဖ်ဝဲကွဲပြားခြားနားသောဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပုံပျက်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်နှင့်စပီကာမှ output ကို signal ကိုနှောင့်နှေး။ သင်တို့အဘို့အဓိကစံနှုန်းများ၏အသံအတိုးအကျယ်အရည်အသွေးသည်ဆိုပါက, သင်အသစ်ကစပီကာသို့မဟုတ်နားကြပ် purchasing စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
စပီကာကိုရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို, နားကြပ်: ဆက်ဖတ်ရန်
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသံ output ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Programs ကို, စပီ၏အားနည်းချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရကိုအလွန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ သငျသညျသစ်ကိုကော်လံများနှင့် (သို့မဟုတ်) အသံကဒ်မရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။